अमेरिकाबाट अायो दुःखद खबरः बाबुअामालार्इ धन्यवाद भन्दै यस्तो सुसाइड नोट सहित किन गरे यी युवाले अात्महत्या? – PathivaraOnline
Home > प्रवास > अमेरिकाबाट अायो दुःखद खबरः बाबुअामालार्इ धन्यवाद भन्दै यस्तो सुसाइड नोट सहित किन गरे यी युवाले अात्महत्या?
अमेरिकाबाट अायो दुःखद खबरः बाबुअामालार्इ धन्यवाद भन्दै यस्तो सुसाइड नोट सहित किन गरे यी युवाले अात्महत्या?
admin September 13, 2018 प्रवास 0
क्यालिफोर्निया, अमेरिका । अमेरिकामा एक नेपाली युवकले आत्महत्या गरेका छन् । क्यालिफोर्नियाको हल सान पाब्लो बस्दै आएका नवलपरासी रामग्राम वडा नम्बर २ का कृष्ण भट्टका २३ वर्षिय छोरा संचित भट्टले ११ तारिखका दिन पुलबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार संचितले रातीको ९ बजे आँफैले कार चलाएर सान राफेलको पुलबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका हुन् ।
प्रहरीले संचितले लेखेको सुसाइट नोट पनि फेला पारेको छ । उनको सुसाइट नोटमा आँफुलाई जन्म दिएका बा आमालाई उनले धन्यवाद दिएका छन् भने आँफुले कसैका कारण आत्महत्या नगरेको कारण समेत खुलाएका छन् । उनले सुसाइट नोटमा भनेका छन् मैले कसैको केही नबिगारेको समेत छैन । उनले आत्महत्या गरेको कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । संचितको अन्त्यष्टी शुक्रबार क्यालिफोर्नियाको एल सोबरनेटमा गरिने बताइएको छ ।
अब उपरान्त हिन्दु मन्दिरमा पशुबली प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयको -पूरा हेर्नुहोस
परदेशीहरूकाे पीडालार्इ समेटिएकाे यस्तो मार्मिक गीत बाहिरियो… नेपालमा हुनेले मन थापेर भिडियो हेर्नुहाेला
परिवारको भविष्यमा खुशी ल्याउने सपना बोकेर मलेसिया पुगेका एक नेपालीको सुतेकै ठाउँमा ज्यान गएपछि…
नेपाली उबर चालक माथि यस्तो गर्ने युवतीहरू समातिए…
नेपाली चेली कुवेतमा ४ बर्ष देखि बन्दक, शृजना भन्छिन नेपाल फर्किने आशै छैन मालिकले यस्तोसम्म गर्छ (भिडियो हेर्नुहोस)